Alcohol Pads 1 Box 100 Pcs – SUNNY eSTORE
Alcohol Pads 1 Box 100 Pcs
SUNNY eSTORESKU: AP-NOBR-1-268 (S010)
ထိရောက်သည့် ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း - ဤအရက်ပြန် pad အခု ၁၀၀ ပါသည့်ဘူးသည် သင်ထိတွေ့ သည့် မျက်နှာပြင်များကို ထိရောက်စွာဆေးကြောသန့်စင်နိုင်သည်။ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်မျက်မှန်တို့အ တွက် ဖုန်၊ အစိုဓာတ်နှင့် မလိုလားသည့်အမှုန်လေးများအား ဖယ်ရှားပေးသည်။
တစ်ခုချင်း လုံအောင် ထုပ်ပြီးပိတ်ထားသည် - အရက်ပြန်တစ်ရှူးတစ်ခုစီအတွက် တစ်ခုချင်း လုံအောင် ထုပ်ပြီးပိတ်ထားသည်။ ညစ်ညမ်းမှုဝင်ရောက်ခြင်းအလားအလာကို လျော့ကျစေသည်။ အိတ်တစ်ခုချင်း စီအတွင်းမှာရှိသည့် သတ္တုအတွင်းမျက်နှာပြင်သည် အရက်ပြန်ရေငွေ့ပြန်ခြင်းကို ဟန့်တာပြီး၊ ပို၍ကြာ မြင့်စွာ သိုလေှာင်စေနိုင်သည်။
အရက်ပြန်ပါဝင်မှု ၇၅% - အရက်ပြန် pad တစ်ခုချင်းစီတွင် အရက်ပြန် ၇၅% ရှိသည့် 0.17 fl oz ပါဝင် ပြီး၊ ၎င်းသည် သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနှစ်ဘက်ကို ပွတ်တိုက်ရန် သို့မဟုတ် သင့်လက်ဖဝါးများ၏ တစ်ဖက်ကို ပွတ်တိုက်ရန် လုံလောက်သည်။ နေ့စဉ်သုံးရန်အတွက် လွယ်ကူအဆင်ပြေသည်။ တံခါးခလုတ်လက် ကိုင်နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများကဲ့သို့သော နေ့စဉ်သုံးသည့်အရာဝတ္ထုများတွင် အရက်ပြန်တစ်ရှူးများအား အသုံးပြုပါ။
အရေအတွက် - အရက်ပြန် pad အခု ၁၀၀ ပါ ၁ ဘူး
Effective Cleaning: This box of 100 pcs alcohol pads can effectively clean off the surface you touched. Remove dust, moisture, and unwanted little particles for your cellphone, glass lens.
Individually Wrapped & Sealed: Individually Wrapped & sealed for each pieces of alcohol wipes. Reduce potential pollution. Tin lining on the inside of individual bags, preventing the alcohol from vaporized, to extend its storage time.
75% Alcohol Content: Every alcohol pad contains 0.17 fl oz of 75% alcohol, which is enough for rubbing two sides of your cellphone or one side of your palms. Convenient for daily use.
Use the alcohol wipes at the door knob handle, cellphone, such daily used objects.
Includes: 1 box of 100 pcs alcohol pads